“Cristiano Ronaldo waa sida mishiin oo kale” – Jerome Boateng – Gool FM
“Cristiano Ronaldo waa sida mishiin oo kale” – Jerome Boateng
(Munich) 23 Abriil 2018 Daafaca kooxda Bayern Munich ee Jerome Boateng ayaa amaanay weerar yahanka Real Madrid ka hor kulanka arbacada.
Jerome Boateng ayaa sheegay in Ronaldo uu lamid yahay mishiin maadaama uu gool ku dhalin karo labadiisa lugood iyo madaxiisa.
Wuxuuna intaa ku daray inuusan jirin weerar yahan u dhamaystiran sida Ronaldo oo kale, wuxuuna cadeeyay in aan guul lagu tashan karin haddii Ronaldo uu kaa soo horjeedo.
“Labada lug ayuu ku laadi karaa kubadda iyo madaxa, wax walba waa ay u fudud yihiin marka uu joogo goolka hortiisa, wuxuu u muuqdaa sida Mishiin oo kale” ayuu yiri Jerome Boateng.
“Ma jiro weerar yahan u dhamaystiran sida Ronaldo oo kale, suurogal ma ahan inaad guul ku tashato isaga oo kaa soo horjeeda, wuxuu awoodaa marwalba inuu fursad helo”.
“Tijaabooyin fiican iyo kuwo xun ayaan kala kulmay isaga, 4-0 ayaan uga adkaanay xulkiisa koobkii adduunka ee 2014, Real Madrid-na hal mar ayeey noo suuro gashay inaan reebno, laakiin iyaguna labo mar ayeey na reebeen”.
"Kaliya Sedax Koox uusan Goolkooda Gaariin, Isagoo Kamid noqday Tirada goolasha Sodon leyda Horyaalka, iyo Afrikankii ugu Horeeyay ee Taariikhdan Sameeya"... waa Xaqiiqada Ka Dambeeysa inuu Salah Noqdo Laacibka Sanadka ee Premier League: WARBIXIN